Ndị ọkachamara na Semalt na-ekwu okwu na Voice Search - Mmetụta na SEO
Nchọpụta okwu olu pụtara n'ụzọ dị mfe nghọta njikarịcha search engine kama na-aga n'ihuime ka ọ dịkwuo mkpa karịa afọ ole na ole. A na-ekwu na ajụjụ gbara ajụjụ na-aga n'ihu n'ihu ọha ma e jiri ya tụnyere akwụkwọ ntuziaka ahụederede ajụjụ na igbe nyocha ama.
Artem Abgarian, onye isi ahịa ndị na-azụ ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, kwupụtara ọchụchọ olu na mkpa ya maka ịrụ ọrụ SEO.
Gịnị Bụ Nchọgharị Olu?
Iwu ndị na-ekwu okwu n'ime ngwaọrụ nwere olileanya na ịnweta azịza bụ olunyocha. Ọtụtụ ụlọ ọrụ sayensị di elu na-anọgide na-agụnye atụmatụ ịchọpụta olu na ngwaọrụ ha - lavish alice multi coloured dress. Ihe atụ na-agụnye "Ok,Google "maka Google," Siri "na ngwa Apple," Cortana "nke Microsoft," Alexa "na Amazon, na" Bixby "maka Samsung.
Ihe karịrị ọkara nke ọnụ ọgụgụ Google natara n'aka smartphones. Na nkendị a, pasent 20 n'ime ha na-alaghachi na iwu olu n'emeghị ndị ọrụ na-emetụ ihu ha. Ka ọ dị ugbu a, olu na-achọ ịchọta iri itoolu na isepasent nke asụsụ Bekee, na-eme ka ha nwekwuo ezi. Dabere na nchọta Google, ọ bụ ya na njirimara olu mmadụziri ezi.
Ihe mere ịchọta ọchụchọ ọchụchọ olu bụ iji ụdị dijitalụ na-abanye n'ụlọndị na-enyere aka na ntakịrị ihu. Dịka ọmụmaatụ, Amazon Echo's Alexa na Google's Home ngwaọrụ na-adabere nanị na okwu ọnụ na iwu..Habụ ihe na-atọ ụtọ ma bara uru, nke bụ ihe mere ọtụtụ ndị ọrụ na-eji eme ka ha nwee ike ịme ka mkparịta ụka na-eme ka ha nwee mkparịta ụka.
Nchọgharị mkparịta ụka bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa na njikarịcha search engineenwe pasent 70 nke ajụjụ nyocha niile nke gụnyere asụsụ nkịtị. Ndị mmadụ na-agwa ha ngwa ngwa dijitalụ n'otu ụzọ ha ga-esijụọ ajụjụ ndị a na-agwa ndị ọzọ.
Nchọpụta Ọchịchọ Maka Ihe Nrite na Nsona Aka Search Google
Google na-aga n'ihu na-eme ọganihu dị ukwuu n'inyocha mkparịta ụka, na-esi nanyocha olu, ma na-aza ajụjụ. Ọ na-amụta ịmata na ịkọwa okwu ndị mmadụ ji eme ihe iji mee ka onye ọrụ zuo ezuoma weputa nsonaazụ kachasị mkpa.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na Google natara ajụjụ atọ ọchụchọbanyere ebe ị ga-azụ akpụkpọ ụkwụ, ọ ghaghị ịmegharị nsonaazụ ọchụchọ ya dabara na mkpa ya na ndị ahịa. "Ebee ka m nwere ike ịzụta akpụkpọ ụkwụ?" bụ eziokwuarịrịọ. "Ebee ka m kwesịrị ịzụta akpụkpọ ụkwụ" bụ ajụjụ njiri echiche. "Ebe ịzụta akpụkpọ ụkwụ" bụ ngwakọta nke echiche na eziokwu, na-akpata nnọpụichenke ngwaa nke na-egosi ihe kpatara ya. Esemokwu ndị a na-egosi na ọdịiche, ihe kpatara ngbanwe ọ bụla, na ike ije ozi kpọmkwemIhe ndị a rụpụtara nwere mmetụta dị ịrịba ama na ihe Google na-enweta site nyocha ahụ.
Google nwekwuo nzaghachi kwadoro maka ikpe ndị ọzọ. Ebumnuche Googlega-eje ozi dịka ụlọ ahịa nkwụsị maka nkwụghachi azụ ma na-eduzi ndị ọrụ na ibe nke nwere ozi a jụrụ. Ọ yiri yainye otu azịza doro anya, nke bụ ihe Siri ma ọ bụ Alexa na-eme mgbe ndị ọrụ jụrụ ha ajụjụ.
Ụdị azụmahịa na e-commerce na-atụ egwu na kaadị azịza na-abụ nnukwu egwuna ọnụ ọgụgụ nke okporo ụzọ gaa na saịtị na ọnụego clicks. O nwere ike bụrụ eziokwu, ma kaadị azịza dị ebe a iji nọrọ na nhọrọ kacha mma maka ụlọ ọrụ,bụ ịsọ mpi iji merie ha ma ọ bụ nwee ihe ize ndụ nke ndị na-asọmpi ha.